Namuhla, thina sikanye nawe zofunda uthola "impilo laseSiberia. Limfosan base" impendulo evela kumakhasimende abo. Ngaphezu kwalokho, kuhle ngaso sonke bajwayelane le ngxenye. Mayelana naye abaningi bathi, kodwa uze ukuvumelana kunzima. Ngemva izidakamizwa esikhundleni ezingabazisayo phambi kwethu. Okuningi ngokunembile, lo okufakiwe begazi. Kukholakala ukuthi le mithi - sadlala imali. Kodwa ingabe kunjalo ngempela? Mhlawumbe kufanele sithembele "Impilo laseSiberia"? Noma iluphi uhlangothi lomkhiqizo? What do abathengi yakho konke lokhu? Uma ungazama ukuthatha Izithako zokudla?
Mhlawumbe into yokuqala esiyifundayo ukuthi sonke kufanele ukwenze. Njengoba sekushiwo, Izithako ezivamile phambi kwethu. Lokhu kuyaqondakala. Eqinisweni, "iqoqo" amavithamini, amaminerali, kanye nezakhi. Ngalesi "impilo laseSiberia. Limfosan base" impendulo evela kumakhasimende abo uthola okuhle. Phela, kuyacaca ukuthi ngenxa izidakamizwa phambi kwethu.
Kuphela ukuthi amaphilisi ambalwa angajwayelekile. Kungani? It is ethulwa ngesimo powder mass ukuthi sidinga ukuthathwa ngomlomo. sici esihle kakhulu, ikakhulukazi labo abanezinkinga ukugwinya amaphilisi. It kuvela ukuthi yini engase ibizwe ngokuthi u-jikelele Izithako zokudla. Ngemva powder - kungcono kangako. Kodwa lapho ithuluzi Kunconywa? Lokhu kwenziwa kanjani? Yini abacabanga ngayo amakhasimende?
Iphuzu liwukuthi noma yimuphi umuthi e Ukukhetha intengo. Uma ungakhetha phakathi izipesheli eziningana okungcono, kuyazuzisa imibono amakhasimende. Futhi zamanje Izibuyekezo nezithasiselo zethu uthole kule ndaba ezinhle kakhulu.
Kungani? Ukukhetha "Limfosana" esikhulu kakhulu. Yebo, akusiyo jikelele njalo, kukhona ezinye izinketho umkhiqizo, okuyinto, isibonelo, ukukhonza ukuthuthukisa amasosha omzimba, noma ukuhlanza umzimba kukhona. Okungukuthi, "Limfosan" - lahlukene izithasiselo engokwesayensi ekulondolozeni impilo yakho. Futhi singasebenza ezimweni ezahlukene. Ngoba zonke izibuyekezo okufakiwe abathengi, sicela.
Ngaphandle ukuthi uma ucabanga mayelana ezihlukahlukene ocebile amavithamini noma izithasiselo yemvelo - lokhu ayikhona inkomba izinga, akusona isiqinisekiso, okuyinto kumele asekwe. Lapho indima ebalulekile udlalwa isicelo ngqo kanye nempumelelo ingxenye ubuciko.
Ukuze uqonde okufakiwe kanjani okuhle begazi phambi kwethu, kufanele sinake izinto ezifana ukwakheka yalo. Kuyinto kule ndawo uyakwazi aveze iyasiza noma ukwehluleka imithi. Ngakho lokho kungabonakala maqondana izidakamizwa ngokuthi "isizinda Limfosan"? Ukwakheka lezimanga zayo eziningi. Yebo, into incike kungaba phambi kwethu "Limfosan" (njengoba sesibonile, izinto eziningi kubo kwesokudla "bonke izikhathi.) Kodwa ingxenye enkulu, izithako ezisebenzayo main ziyafana lapha. Futhi buka of the ukwakheka okufanayo kwakhiwa ucishe ethize.
"Impilo laseSiberia. Limfosan base" izibuyekezo ke uthola okuhle. Kungani? Iqukethe izithako zemvelo kuphela. Kuphela izinto yemifino, okuyinto, ngokuhlanganyela nomunye ukunikeza omuhle kakhulu yi imiphumela emzimbeni. Ngeke uthole yinoma yimuphi amakhemikhali noma izingxenye usithe. Kuphela "izimila".
Ngokwesibonelo, "Limfosan base" siqukethe kuphela of apula pectin, chamomile, ukhova, horsetail, itiye Kuril, Senna. Ngaphezu kwalokho, kukhona futhi inulin, Echinacea futhi rosehip. Njengoba ubona, kuphela ezinye izitshalo futhi izingxenye zazo. Konke zemvelo, akukho amakhemikhali noma izinto ezingafuneki. Futhi kukhona Ukwakheka afanayo sonke "Limfosan" umugqa. Kuyinto ephelele nokugcina amasosha omzimba. Yiqiniso abadala. Izingane ezinjalo Izithako zokudla akunconywa ukuthatha futhi unike ngokomthetho.
Njengoba ubona, kuyilapho akunakwenzeka ngokuqiniseka mayelana ukusebenza izindlela zethu zamanje. Noma kunjalo, bona usalelwe ekhuthaza yemvelo ukuthi alithintwa kakhulu kabi umzimba. Ayikho amakhemikhali, izithako herbal kuphela, okuyinto kumjabulisa kakhulu. Kodwa kuthiwani isicelo "impilo laseSiberia. Limfosan base"? Lapho-ke ezinqunyiwe noma bancome ukuyisebenzisa?
Ngokuvamile lezi zimo kakhulu. Konke kuncike onjani "Limfosan" phambi kwethu. Siye sathola ukuthi amakhasimende kule ndawo anikele ezihlukahlukene omkhulu. Ungakhetha noma iluphi amaphilisi athile ngenhloso ethile. Noma jikelele. Kodwa ngokuvamile, umphumela jikelele emzimbeni kuyoba lonke uchungechunge okufanayo "impilo laseSiberia."
Izithako namuhla Zethu - lawa real "umsuka ubumsulwa." Lokho okubizwa ngokuthi "Limfosan" abathengi. Leli thuluzi isetshenziselwa ukunakekela umzimba ngendlela ithoni. Kodwa isenzo main yalo - elihlanza. It lihlanza futhi asenze umzimba, ngomusa ayisukumele kumalungu zakhe siqu. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukunakekela abantu abadala.
Yiqiniso, akufanele sikhohlwe ukuthi umuntu ngamunye "Limfosana" kukhona isicelo emincane. Lokho, ngeke nje nihlanze futhi uqinise umzimba wakho, kodwa futhi ukuba bafeze umsebenzi abezokwelapha. Ngokwesibonelo, kukhona "Limfosan E" ( "impilo laseSiberia"). Linikezwa njengendlela yokuthola control inkathazo. Udinga ukuyisebenzisa uma uhlangabezana parazitivnye isifo wamathumbu noma isibindi / ipheshana biliary. Kodwa "eziyisisekelo" imodeli - ikhambi jikelele. Kunconywa amasosha omzimba omdala, kanye uma unesifo esingelapheki. Ngolwazi oluthe xaxa mayelana ngamunye "kwezinhlobo" ukuze waziwe kusukela incazelo ngayinye engalungile. Kodwa isenzo jikelele toning futhi firming.
Indlela "Limfosan base" hhayi kuphela? Siye sathola ukuthi lokhu ibhekwa wezokudla, okuyinto ethulwa ngesimo powder. Nge amaphilisi kucacile - angaphuzi abese ekhohlwa. Kodwa nge zonke powder kunzima kakhulu kangakanani. Hhayi okuningi, futhi kujabulisa.
Ngomqondo onabile, wokulungiselela ukudla amavithamini yethu namuhla ukuthola okubuyayo. Abanaso aludingi handling ekhethekile. Mane uthele inkomishi amanzi kancane ashisayo (mayelana 170-200 amagremu, abilisiwe) bese ukuqedela powder 1 isipuni spoon. Manje Mix wathola kahle "cocktail" futhi ukuwaphuza.
Qaphela - udinga ukuthatha "Limfosan" esiswini esingenalutho, okungcono ekuseni, ngaphambi kokudla kwasekuseni. Nokho, noma yimuphi omunye ukudla. Njengoba ubona, lesi sidakamizwa "Impilo Limfosan isizinda. LaseSiberia" yokusetshenziswa silula. Futhi kulolu BAA uthola umbono omuhle. Kulula kangakanani ukulungiselela okufakiwe ukusetshenziswa. Kuphela ngezinye izikhathi kunezindlela izikhalazo ukuthi ifomu powder izigaxa ngesikhathi ukuxuba. Udinga nje ngokucophelela afeze inqubo dilution we okufakiwe in the ketshezi. Lena into kuphela ukuthi ngeke ajabule. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba athobele ngomthamo, noma powder siphela ngokuphelele. Ngakho, futhi, kukhona izigaxa.
Yini enye eningayenza unake? Nezithasiselo libuyekeza ngokwabo okuhle kakhulu isikhathi esiningi. Ikakhulukazi uma kuziwa leli phuzu, njengoba izindleko. Ngokuvamile "izinto zemvelo" iyatholakala kwi amanani ngenxa yokubiza abathengi "aphule ibhange". Futhi ngeke ajabule.
Kodwa nanku "impilo laseSiberia. Limfosan base" Izibuyekezo uthola ucishe esihle kule ndawo. Kungani? Izindleko kwelinye iphakethe standard ruble 400. Imali okuphakanyiswe powder kwanele isikhathi esingangenyanga ukusetshenziswa. Hhayi ebiza kakhulu uma ucabanga. Ngokwengxenye enkulu, nezinye Izithako zokudla, okungase ngokuthi "umsuka ubumsulwa" (ukuhlanza futhi toning) kubiza ezibizayo izikhathi 2-3 ngaphezulu.
Kodwa uma ungenayo okukhuluma "eziyisisekelo" imodeli, isilinganiso price tag azosethwa emuthini esifundeni ruble 180-250. Hhayi ebiza kakhulu. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuthola kalula futhi ukuthenga "Limfosan Arthro" I-ruble angu-200. A option enhle futhi engabizi ukulondoloza ithoni umzimba. Ngokuvamile, izindleko sezizonke ejabulisa. Asikho isidingo ukukhokhela okuningi umuthi ezingabazisayo kakhulu. Ngenxa Izithako zokudla abekho ngokwabo abanalo ayelapha. Futhi ngezinye izikhathi off-ngokubeka. Ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi iningi lalezi zindlela nemithi ungathenga ngaphandle kadokotela bese ukuthatha ngentando yakho.
umehluko Huge ukuvela eduze umkhiqizo wethu wamanje uma kuziwa nekusebenta ukusetshenziswa kwezimali. ". Limfosan isizinda sezempilo laseSiberia", Yikuphi lisiqondise isivele eyaziwa - kuba okufakiwe begazi. Futhi ngakho abathengi kakhulu kuba priori hhayi obuphathekayo. Awukwazi bathembele luhlobo ezingezona ezokwelapha ezokwenza okuthiwa ukwelapha futhi aphilise. Kungenzeka bakholelwa ukuthi izidakamizwa eziyocebisa umzimba nabanye amavithamini namaminerali, kodwa yilokho ngiyilahle izifo (ezingamahlalakhona ikakhulukazi) kunzima ukukukholwa.
Ngakho-ke, kuyabonakala ukuthi "impilo laseSiberia. Limfosan base" uthola ezihlukahlukene ukubuyekezwa. Iningi lazo zisikisela ukuthi umphumela omuhle ekuhlanzeni umzimba. Okungukuthi, umkhiqizo wethu wamanje - kuba laxative ekahle ukuthi Asigcini ukuthuthukisa wamathumbu umsebenzi, kodwa futhi esisisiza izivikeli mzimba. Yebo, akubona bonke "Limfosan" kuyasiza. Kodwa iningi imicabango yabantu akhayo kule ndawo.
Abaningi aveze ukuthi "Impilo laseSiberia" (amasheya enkampani ngokuvamile ukunikela ukuthenga lonke umugqa "Limfosana" ngamanani yokuncintisana) - ithuluzi esisiza ukuba ulahlekelwe isisindo. Ngomqondo onabile, inkulumo indlela okuyiyo. Phela, ngaphambi BAA kithi, kusiza ahlanze umzimba. Nokho, kukhona iphuzu elilodwa ezimbi kule ndawo. Ibizwa ngokuthi habituation. Inqobo nje uma usebenzisa "Limfosan" intuthuko kuyoba obonakalayo. Kodwa kubalulekile ukuyeka isisindo njengoba extra ngokushesha sibuye size kini. Ngisho noma ekudleni okuqinile. Umzimba nje Ufika esetshenziswa isenzo yezingxenye of ihlumela kwethu kwamanje okufushane, ke ngaphandle kwakhe ubhekane nezinye inkinga kunzima kuye.
Kodwa abanye abathengi bayaqinisekiswa ukuthi, naphezu kweqiniso lokuthi lena okufakiwe begazi, it has ayelapha. Ngamanye amazwi, okwazi ikhambi okusheshayo isifo. Ngokwesibonelo, izifo kwesibindi nezinso, amathumbu. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo umbono zingatholakala kakhulu. Ingabe zikhona izisekelo ngempela? Ingabe kunzima ukuphendula.
Uma ucabanga ngakho, kodwa akekho noyedwa owake BAA ayikwazanga ngempela aphathe. Ngandlela-thile ukuqinisa umzimba, kakhulu, ukuze imvundo amavithamini namaminerali - inguyebo. Kodwa izakhiwo lapha oqabulayo izithasiselo ongizalayo cha. Leli akulona panacea lesi sifo. Nakuba nomkhiqizi uthembisa wena nje ukuthi. Ngakho, ungamangali uma ubona izibuyekezo "Limfosane" njengesilwane izindlela ayizwakali. ekhungathekisayo Okuningi kumele bashayele umbono ethi lo mkhiqizo ethile iye yasiza ukuze elashwe isifo esithile.
Ayikho isitifiketi kanye nokuqinisekiswa kokuba semthethweni izakhiwo zokwelapha we "impilo laseSiberia" akukho. Ngakho, asikwazi ngokuqiniseka ukuthi izimpahla empeleni ngempumelelo. Kunalokho, lapha nendima eyadlalwa self-hypnosis noma ukuzilimaza ikhono lokukholisa. Enough ukukholelwa ukuthi awukudla izidakamizwa, uyozizwa intuthuko. Kwaba ngakho eqinisweni, abathengi abaningi bakholelwa. Ngamanye amazwi, emkhakheni zokuhlanjululwa "Limfosan" okuhle, kodwa hhayi okunye. Akakwazi aphathe.
Yini okunye okufanele banake? Ngalesi sikhathi, njengoba imiphumela emibi. Ziyakwazi nganoma yisiphi izidakamizwa zidlala indima ebalulekile. Ikakhulukazi ezingabazekayo Izithako zokudla. Nazi kunazo zonke abathengi kule ndawo ukuza ukuvumelana. Futhi akajabuli kakhulu.
Yini ephathelene? "Impilo laseSiberia" amanani "Limfosan" izipesheli, njengoba sesibonile, ngempela ezasiza abantu. Ngaphezu kwalokho, lokhu izidakamizwa Kungasiza kakhulu endabeni ethile. Ikakhulukazi uma umgomo - kungcono kwesisindo, ngokuhlanza umzimba. Kodwa sebelahlekelwe yini?
Kaningi masisho ukuthi izithasiselo zethu begazi zamanje abaningi kangaka engemihle. Ngaphezu kwalokho, umenzi kuyoba ngazo zonke izindlela ukunqabela leli qiniso. Into kuphela ubona - wukuthi phakathi kuphela isici esiyingqayizivele contra-wabonisa sezakhi ukuthi liyingxenye "Limfosana". Kuzo zonke ezinye izimo, ungase, ngaphandle kokungabaza, thatha amaphilisi.
Kodwa empeleni, abathengi ukuthenga eziningi zempilo ngenxa ukusetshenziswa "Limfosana". Ngokuvamile, lapho umlutha (njengoba emzimbeni futhi umuntu - iqala "mania" kanye nokulutheka), komzimba nezinto, iziyaluyalu emathunjini. Ngaphezu kwalokho, ngisho ngemuva kokuhoxiswa yokwamukela sokubuyiselwa ngeke kwenzeke. Ukubuyela umzimba "ifomu endala", eyayizoba "Limfosana" kunzima kakhulu. Singasho ukuthi iyoletha yalokho ezithile kusuka ihlumela, uzobona ukusebenza yayo, kodwa sebelahlekelwe yini? IBhodi - kungcono impilo yakho siqu. Amasosha omzimba ngabe babungonakala, amathumbu ngeke senqabe ukusebenza kahle ngaphandle namuhla yethu 'pacemaker. " Ngakho-ke, thatha ngokucophelela le imithi.
Kodwa akugcini lapho. "Impilo laseSiberia" (ukwabelana ezihlinzekwa inkampani ngezinye izikhathi bakhangwa "Limfosanu") elinye futhi iphuzu emibi okufakiwe begazi powder. Kuyini lokhu? Ukuze eziningi kungase kubonakale kuyinto engasho lutho, kodwa cabanga yayo namanje ezifiselekayo. Kuyinto umbuzo zokunambitha "Limfosana".
inkinga itholakala lokuthi ukuthi ayebaba. Futhi ngisho abathengi abaningi bathi ezimbi. Ngenxa yalesi Eqinisweni, "impilo laseSiberia. Isizinda Limfosan" kwenza Izibuyekezo ezingezinhle. Awufuni ukwamukela angadliwa, futhi ngisho ngezinga elithile umuthi oyingozi nge idumela ezingabazisayo. Ngakho-ke, abaningi ngokushesha ukwenqaba indlela enjalo ngenxa yokulondoloza amasosha omzimba, kanye umzimba ukuhlanzwa. Kwaba kakhulu ingozi okungahambisani zakwazi ukwenza lokho okulindelwe.
Futhi kwenzekani ekugcineni? Isihloko namuhla Zethu - ukusetshenziswa okwandile Izithako zokudla. Konke kuncike kulokho ejenti ethize umugqa kwenzeka. Kodwa umphumela jikelele emzimbeni kumele kuciniswe. Futhi, empeleni, ukuhlanzwa. Konke "Limfosany" sokubhekana kahle. Ikakhulukazi uma uphuza lokhu nsuku zonke "cocktail." Kodwa intengo ukukhokhela indawo, uma ngikhuluma iqiniso, akajabuli. Akukhona lokho kuphela, kufanele akhokhe imali (kancane, kodwa namanje), ngakho namanje futhi engozini ngamabomu impilo yakhe. Ayikho isitifiketi sangempela kusuka umkhiqizo wethu wamanje akukho. Futhi yingakho abaningi batusa it ukusetshenziswa jikelele.
Zinqumele bona. Kunoma yikuphi, kuyacaca ukuthi sibhekene Izithako ezivamile wezokudla, ezikhombisa ukuthi zingadala siklanyelwe "imali etholakale ngokungemthetho yamukeleke" imali futhi "udebe service" abathengi kalula futhi ngingakazi lutho. Konke sithole nale izidakamizwa - ukuphazamiseka wamathumbu and eziningi engemihle. Plus ukulahlekelwa yemali ngeke sibekezelele ukujwayela kuya "Limfosanu". Ngokuvamile, kuba izindlela ezingabazekayo kakhulu, okuyinto kufanele kugwenywe. Amasosha omzimba abantu abadala nezingane Kungcono ukuthenga esinye isidakamizwa.
Omunye umthombo amavithamini "Complivit selenium"
E-400 Vitamin: imfundo manual, ukubuyekezwa. Yemvelo vitamin E amaphilisi nge MANJE Ukudla
"Aevit Meligen": yokusetshenziswa, ukwakheka, Izimo, ukubuyekezwa
River port, Cheboksary. ezokuthutha amanzi
Indlela yokwenza izibuko ezivela ephepheni. Imiyalo eningiliziwe